Somaliland Guardian: Sawiradii Soo Dhoweynta Muj Siilaanyo Qaybtii Koowaad
Sawiradii Soo Dhoweynta Muj Siilaanyo Qaybtii Koowaad
Hargeysa(saraarnews)Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Md Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa si balaadhan maanta loogu soo dhaweeyey Magaalda Hargeysa kadib safar muddo qaatay oo uu ugu maqnaa dalka Maraykanka.
Soo dhawaynta Siilaanyo oo ay ka qayb galayn dadweyne aad u tiro badan iyo masuuliyiin sar sare oo ka tirsan xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE oo uu ka mid ah Kusimaha Gudoomiyaha ahna Gudoomiye kuxigeenka Md Muuse Biixi Cabdi kuwaas oo gawaadhi aad u tiro badan kusoo dhaweeyey Gudoomiyaha laga soo bilaabo Madaarka iyo ilaa uu gurigiisa ka gaadhayey.
Gawaadhi faro badan oo ay ku rakiban yihiin Cod baahiyayaasha Mikrofoonka iyo Calamada Xisbiga KULMIYE ayaa ilaa saaka wareegayay magaalada iyadoo si weyn looga dareemayey inuu imanayo Siilaanyo.
Dhinaca Kale waxan dhicin Mudaharaad Mucaaradku sheegayeen inay Xukuumadu la maagan tahay imaanshaha Gudoomiye Siilaanyo kaas oo xisbiga KULMIYE sheegayey inay xukuumadu soo abaabushay kooxo loogu talo galay inay ku mucaaradaan Gudoomiyaha.
Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE Md Axmed Siilaanyo ayaa diyaarad gaar ahi kasoo qaaday magaalada Addis Ababa iyadoo keentay Madaarka Caalamiga ah ee Cigaal International Airport ee Hargeysa
Soo Dhawaynta Maanta loo sameeyey Siilaanyo ayaa ahayd tii ugu weynayd ee Abid lagusoo dhaweeyo Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE iyadoo dadweynuhu la yaabayn waxa gawaadhi is taxday Wadada.
Ciidamada Booliska ayaa iyaguna Amniga Sugayey iyadoo aan wax dhibaato ahi ka dhicin intii lasoo dhaweenayey Siilaanyo
Gudoomiye Siilaanyo oo la hadlayey Shacabka soo dhaweeyey ayaa hadal mahad celin ah u jeediyey dadweyne aad u faro badan oo soo dhaweenayey.
wadada hor marta Madaxtooyada Somaliland oo la filayey in gawaadhida soo dhaweenaya Siilaanyo ay Maraan ayaa la xidhay iyadoo Kolonyada gawaadhida ee Soo dhawayntu way ka wareegayn wadada Dusha ee dabo marta Cusbitaalka Guud ee Hargeysa
ISU SOO BAX BALAADHAN OO LAGU SOO DHAWAYNAYO MUJ:SIILAANYO OO MAANTA KA DHACAY BURCO.
Weriye ka soo waramaya soo dhoweynta Mujaahid Siilaanyo Hargeysa
Muj. Siilaanyo oo la hadlay Dadkii soo dhoweeyey
Wadadii madaxtooyada oo Riyaale kooxdiisu ku gooyeen Baabuur waawey iyo ciidan wata gaadiid tikniko ah
Waxa la Hor marayaa xarunta Guriga shaqaalaha